Ny Fahasamihafan’ny Lahatra Ho An’Ireo Shinoa Roa Nahazo Ny Loka Nobel · Global Voices teny Malagasy
Ny Fahasamihafan'ny Lahatra Ho An'Ireo Shinoa Roa Nahazo Ny Loka Nobel
Voadika ny 26 Desambra 2012 12:51 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Ελληνικά, polski, English
Nankany Stockholm ilay nahazo ny loka Nobel-n'ny Haisoratra tamin'ity taona ity, Mo Yan , mba handray ny lokany. Mifanohitra amin'izany, mbola any am-ponja any Shina ilay nahazo ny Loka Nobel-n'ny Fandriampahalemana tamin'ny 2010, Liu Xiaobo, ary any aminà trano voaara-maso i Liu Xia vadiny .
Tamin'ny resadresaka voalohany natao taminy tato anatin'ny 26 volana, niresaka tamin'ny Associated Press, izay niditra an-tsokosoko tao aminy nandritra ny fotoana nisakafoanan'ny mpiambina ihany i Liu Xia nony farany, tamin-drnomaso ary niteny hoe :” Miaina amin'ny toerana tsy tokony hiainanay izahay “.
Tena marina fa tsy zarizary io toerana io. Mo Yan, solon'anarana izay midika ara-bakiteny hoe ‘Aza Miteny’, dia nanatrika ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ilay nahazo loka Nobel omaly 6 Desambra 2012 ary nilaza fa tsy azo ialana ny sivana ary tsy hanohana izay fangatahana atao ho an'i Liu Xiaobo izy. Na dia izany aza, ireo efa nahazo sy mahazo ny Loka Nobel 134 dia nanao fanentanana, manery ny Filoha Shinoa Xi Jinpin hanafaka an'i Liu Xiabo ny fiandohan'ny Desambra. Tsy misoratra ho isan'ny nanao sonia tamin'io listra io i Mo Yan.
An-dranomaso no nilazan'i Liu Xia fa, ” Miaina amin'ny toerana tsy tokony hiainanay izahay”. Dika sary avy amin'ny vaovaon'ny Now TV.
Raha toa ka mpandresy amin'ny hevitra rehetra Mo Yan, Liu Xiabo, izay nifidy ny hiteny ho an'ny demokrasia sy ny tsy rarin ara-politika, dia nohelohina hifonja 11 taona, ary natao aminà trano voaara-maso mandritra ny roa taona ny vadiny. Nahazo ny loka Nobel i Liu fa very zavatra maro.
Raha ny marina, tsy fantatry ny ankamaroan'ny Shinoa any Shina fa Liu Xiabo no Shinoa voalohany nahazo ny Loka Nobel, satria tsy mba naseho tamin'ny haino aman-jerim-panjakana ny vaovao. Tahaka izany ihany koa, tsy re tamin'ny aterineto ny gogogogon'i Liu Xia, ary tsy hita na aiza na aiza ny anaran'i Liu Xiabo sy Liu Xia.
Ireo fanehoankevitra amin'ny aterineto
Ao amin'ny twitter, ireo tsy mpanohitra sasany dia mamelabelatra ny hadalan'i Shina. Nanoratra ny toe-javatra mahazo azy manokana i Hu Jia [zh] :
Nosakanan'ny mpitandro filaminana tsy manao fanamiana teo am-baravaran'ny tranoko aho indray maraina. Nanontaniako ny antony mahatonga azy ireo hisafidy ny ho andevo ry zareo, ary dia nambarany fa “tsara kokoa ny andevo noho ny mpamadika”. Nanomboka tamin'ny 18 Septambra, dia notanana anaty trano voaara-maso aho noho ny fisian'ny Kongresy nasionaly faha 18-n'ny CCP, zavatra tahakahaka an'izany no nolazain'ilay manampahefana lehiben'ny polisy ahy. Androany, nanontany an-dry zareo aho raha misy ifandraisany amin'ny Liu Xia [ ny fanamafisana ny fanaraha-maso ny fiambenana], nitsiky izy ireo. Anisan'ny zavatra iray mitranga rehefa mandray fitenenana i Lui Xia ny tsy maintsy ametrahana ahy aty aminà trano voaara-maso.
Jian Alan Huang nanambara [zh] fa toetran'ny firenena tsy refesi-mandidy ny hadalàna :
Ao anaty fiarahamonina iray tsy refesi-mandidy, dia tahaka ny tsinkafona itontonan'ny orana ny tsirairay ary tsy afa-mifehy izay hanjo azy. Tsy afaka manao na inona na inona amin'ny roa taona itànana azy aminà trano tsara ambina azy i Liu Xia fa afaka fotsiny miteny an-dranomaso ; tsy afaka mamokatra sarimihetsika momba ny 1962 [the Great Leap Forward / Ilay Dingan-dava Mankany Aloha] i Fung Xiagang fa afaka fotsiny mamokatra sarimihetsika momba ny 1942 [Sino-Japanese War – Adin'ny Shina-Japone] ; tsy afaka manova ny rafita fanivànana i Mo Yan fa afaka fotsiny manao izany ho ara-dalana ho an'ny tombontsoany.
Na dia tsy afaka miresaka momba an'i Liu Xia aza ireo bilaogera madinika ao amin'ilay seha-pifanakalozan-dresaka Sina Weibo, dia betsaka ireo manakiana ny hadalan'i Mo Yan [zh].
@Three passerby in the earthy world: Manao resaky n y kaondrana i @Mo Yan : “misy sivana avokoa ny firenena tsirairay” — fa tsy misy afa-tsy firenena iray eto ambonin'ity tany ity no mandefa olona iray nahazo ny Loka Nobel ho any am-ponja. Raha misy mpanoratra iray migadra noho ny asa-sorany, tsy manana fahalalahana miteny ity firenena ity. Raha toa ka tsy manana fahalalahana hanoratra sy hamoaka izany ao amin'ny fireneny Liu [Xiaobo], dia tsy afaka hifaly sy hankalaza ny vokatry ny Loka Nobel ho an'ny Haisoratra tamin'ity taona ity izahay.
@Hao Miao – mms: Nampiasan'i Mo Yan ny teny hoe ‘tsy azo ialàna’ mba hilazàna ny sivana sy hamintinany fa tsy misy fiantraikany ratsy amin'ny haisoratra ny sivana, mahamenatra loatra ity izy. Mahay mandihy kokoa noho ny mpandihy tsy mifatotra ny mpandihy mifatotra rojo amin'ny tongony… fa ny tena fototry ny olana dia na dia tsy misy rojo aza dia mahay mandihy kokoa ny mpandihy. Resaka fahatsiarovan-tena io. Mankaloiloy ny kabary tsara lahatr'i Mo Yan.
@Zhen Yen12: Amin'ny maha-mpikirakira ny fiteny azy, dia nosoloany antsokosoko ny sivana hanjary fanivànan-tena avy amin'ny fanjakana sy ny haino aman-jery. Tsy fahendrena izany, mahatonga azy ho tahaka ny adala izany. Mba hahazahoany antoka ny fodiany, dia tsy maintsy mandihy amin'ny tongotra mifatotra izy.
@Dreamlike shadow: mivandravadra be fa ny lahatenin'i Mo Yan dia nandalo ny sivan'ny antoko.
Nampiasa ny lojikan'i Mo Yan i Wu Zuo Lai, mpanadihady vaovao malaza, ary nanoratra [zh] lahateny iray ho azy :
Soratako ny fanamarihan'ilay nahazo [Loka Nobel] ho an'i Mo Yan: Misaotra ny fireneko ary misaotra ny CCP tamin'ny famoronana ity fahoriana ity. Harena maharary ho an'ny firenena io saingy ny harena ho an'ilay poety. Tena tsy ao an-tsain'ny vahoaka ny fahoriana sy hadalana toy izao ary novokisan'ity tany manan-karena ity ny asako. Tsy tonga teto handray ity loka ity i Mo Yan raha niaina amin-kasambarana tahaka ireo Eoropeana tavaratra ny Shinoa. Misaotra noho ny amin'ireo fahoriana rehetra ary misaotra ny Antoko. Azafady, ry sakaizako, tsy afaka miteny afa-tsy amin'ny haisoratra aho, raha ny marina dia adala aho ary tsy afaka hilaza ny marina. Ifonako ny maha-toy izany ahy.
Afganistana 4 andro izay